Dowladda Soomaaliya oo lagu Cadaadinayo in ay Xiriirka u Jarto Qadar (warbixin) – Radio Daljir
Juunyo 10, 2017 8:04 b 0
Dowlada Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan xiligan kala kulmeysa Boqortooyada Sacuudi Carabiya, waxaana Soomaaliya lagu cadaadinayaa in go’aankeedii hore ee dhax dhaxaadnimada ah ee wax ka badasho ayna xariirka u jarto Dowlada Qadar.
Ilo Diblumaasiyadeed oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in Soomaaliya xiligan ay cadaadis kala kulmeyso Sacuudiga, waxaana suurto gal ah in Sacuudiga Soomaaliya u diido ama dib u dhac ku yimaado dhaqaale badan uu horey ugu deeqay Soomaaliya.
Sacuudiga ayaan ku farxin warkii kasoo baxay Dowlada Soomaaliya ee ku aadanaa in dhax dhaxaad ka tahay Xiisada Siyaasadeed ee u dhaxeeya Qadar iyo Sacuudiga, waxaana Soomaaliya laga yaabaa in xiisadan ku weyso dhaqaalo badan oo Sacuudiga ugu balan qaaday.
Wasiirro ka socday dowladda Somalia oo tagay Sacuudiga ayaa la kulmay wax u eg bahdilaad, waxaana la sheegay Wasiirada Soomaaliya inay la kulmeen oo kaliya agaasimayaal, halka markii hore qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhigooda ee Sacuudiga heshiisyana la saxiixdaan.
Wararka ayaa sheegaya in Wasiiradan ka socday Dowlada Soomaaliya madaxa loo weyneyn lahaa hadii Soomaaliya taageeri laheed Siyaasada Sacuudiga, hasa ahaatee Wasiirada ayaan loo muujin so dhaweyn sare iyo qadarin kadib go’aankii dowlada Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya ayaa xiligan heesataa labo daran mid dooro, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in Dowlada laga yaabo in mowqifkeedii hore wax ka bedeshao hadii uu kordho cadaadiska uga imaanaya Sacuudiga oo horey dowladan ugu balan qaaday lacag badan.
Dowlada Qadar ayaa kamid ah dowladaha xariirka wanagasan la leh dowlada Soomaaliya, waxaana dhawaan magaalada Doha booqasho ku tagay Madaxweynaha Soomaaliya uu lasoo kulmay Boqorka dalkaasi.
War qoraal ah oo dhawaan kasoo baxay dowlada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka xun tahay xiisada ka taagan wadamada Khaliijka Carabta, waxa ayna Soomaaliya ku baaqday in xal diblumaasiyadeed lagu xaliyo muranka taagan.